I-Zixi: Ihambisa Ngokuphepha Ividiyo ebukhoma, I-Broadcast-over Video nge-IP - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB BONISA UVULA
Thatha i-1 iqoka uchwepheshe wezimboni, uStephen Stewart, njengo-COO.
IMagewell to Premiere Ultra-Compact, 12G-SDI M.2 Capture Card at ISE 2020
Ikhaya » Ukudalwa kokuqukethwe » I-Zixi: Ihambisa Ngokuphepha, Live-Broadcast-Video Video over IP
I-Zixi: Ihambisa Ngokuphepha, Live-Broadcast-Video Video over IP
Kuvela kuTim Baldwin, iNhloko Yomkhiqizo, iZixi
Abathengi banamuhla bafuna okuqukethwe kutholakale kalula. Bafuna ukudla okuqukethwe nganoma yisiphi isikhathi, kunoma iyiphi insiza, ehlanganiswe ngezindlela ezanelisa izintshisekelo zabo futhi ezilethwa ngamanani entengo aphoqelelayo. Izinkampani zemidiya ziyaqaphela ukuthi zidinga ukudala izinhlelo eziningi eziya ezindaweni eziningi, futhi ukusatshalaliswa kwe-IP kuyindlela engcono kakhulu yokufeza lokho. Kepha njengoba abathengi bethuthela kule ndawo yezokuxhumana enamadijithali, imithombo nokusebenzisa kuqala ukuthola inkimbinkimbi kakhulu ngamaketanga wokuthenga, futhi ukuphepha kungaphenduka inkinga.
I-Zixi isiza abanikazi bokuqukethwe kanye nabahlinzeki ukuzulazula la ma-chain amasha aqhutshwa yi-inthanethi ngokunikeza kokubili ukubonakala nokuhamba okuphephile kokuqukethwe kulo lonke. Ngobuchwepheshe obunqobayo be-Emmy, i-Zixi ingumgogodla kungqalasizinda yokusetshenziswa kwamavidiyo abukhoma, isiza abahlinzeki bokuqukethwe bangene esikhundleni sokuhambisa ividiyo satellite nefayibha enekhambi eliguqukayo kakhulu, elinamandla, elingabizi futhi elivikelekile elenza i-inthanethi isebenze ngokusatshalaliswa kwevidiyo ephezulu kakhulu.
UKUKWELULA ISIVIVINYO SOKUVIKELWA KWEVIDIYO YOKUGCINELELA UKUQINISEKISA ISIQINISEKISO
Siyaqaphela ukuthi ukuphepha embonini yezokusakaza kuyikhathaza kakhulu, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngokuqukethwe okubukhoma kwe-premium. Uma kukhulunywa ngokuhambisa imifudlana nge-IP, abahlinzeki bokuqukethwe badinga ukuthi babe nesisombululo abangabheka ngaso lokho kuthutha futhi baqinisekise ukuthi ukusakazwa kwethulwa ngokuphepha nangokuphepha endaweni ngakunye.
Ukuvumela abasabalalisi ukuthi basuke endaweni yokubonisa iphoyinti noma iphuzu-kuya-ku-multi-point-workfall ukuya ekupheleleni kokuphela kokufika kokusebenza ngaphezulu kwe-IP ngokuphephile nangekhwalithi yokusakaza, iZixi idale indiza yokulawula esekwe ngamafu iZEN Master. Nge-ZEN Master, iZixi ihlinzeka ngesisombululo sokuqapha kwenethiwekhi nokuphatha okuvumela abahlinzeki bokuqukethwe banamuhla ukukala ngokuphepha ukusatshalaliswa kwevidiyo yabo ngokuzethemba okuphelele kwekhwalithi yokuqukethwe nokusebenza. Lolu hlelo lokulawulwa okuyinkimbinkimbi oluvumela abathengi ukuthi babone lonke uchungechunge lokuhlinzekwa kokuthuthwa kwamavidiyo kusuka ekutholeni kuya ekulethweni ku-CDN, MSO, MVPD, noma ipulatifomu ye-OTT Ngokunikwa lo mbono wokuphela kokuphela ku-ZEN Master, amakhasimende ethu anokuqinisekiswa okuqhubekayo kokuthi okuqukethwe kwevidiyo yawo kuhanjiswa ngokuthembekile kuma-endpoints okuhloswe ngawo.
I-BEST-IN-CLASS TECHNOLOGY YOKUGCINA IZITOLO ZOKUPHILA
Izivumelwano zokuphepha ezisezingeni eliphakeme ezisezingeni eliphakeme zeZixi nokuvikelwa okuyinkimbinkimbi kungenye yezizathu ezinkulu kakhulu amakhasimende ethu kanye nabalingani bakhetha ukuthumela okuqukethwe kwabo usebenzisa ungqimba lwezokuthutha lwe-Zixi Platform. Yonke imininingwane ekunethiwekhi evunyelwewe yi-Zixi ivikelwe kusetshenziswa indlela yokuphepha enezingxenye eziningi.
Ngomnikelo obukhoma nokulethwa, iZixi isebenzisa izindlela ezimbili zokuvikela ukuvikela okuqukethwe. Indlela yokuqala ukubethela kukhiye oyi-tuli usebenzisa i-AES-128 / 256 encryption. Ngale ndlela, ukhiye ufakwa kuthuluzi lokuthumela nelokwamukela futhi uma amaphakethe ehlukaniswe umuntu wesithathu azobhalwa ngemfihlo futhi angachazeki - le ndlela inikezela ngezinga eliphansi lokuphepha ekusakazeni. Indlela yesibili yokuphepha ene-Zixi ukusetshenziswa kwe-Idatha Yezokuphepha Yezindawo Zokuphepha (i-DTLS) phakathi kocingo lokuthumela nokwamukela. I-DTLS inikezela ngokulawulwa okuphelele kweseshini ukuze ukusakazwa kungaphazanyiswa phakathi komthombo nendawo okuyiwa kuyo. Ukusebenzisa kwethu ukuphayona kwe-DTLS kusho ukuthi ukusakaza izinhlelo zevidiyo zisebenzisa i-Zixi ukushintshanisa okuqukethwe okusakazwa bukhoma ngaphandle kokuvumela ukubonwa, ukuphazanyiswa, noma ukuthungwa komyalezo futhi kuvikelwe ekuhlaselweni yi-man-in-the-middle (MITM). Ngokwengeza ukubethelwa kwedatha yokuphela kokuphela sisebenzisa izindlela ezingeziwe zokuphepha kungqimba yendiza yethu ye-ZEN Master Control, ngokulawula ukufinyelela kokuphatha, amalungelo abasebenzisi, nokuthi umuntu angangena kanjani ngaphandle kohlelo uqobo ngekhwalithi yebhizinisi elilodwa. (SSO) kanye nokuqinisekiswa kwe-2-factor.
I-Piracy iyakhathazeka kakhulu kumakhasimende ethu uma kuziwa ekusakazeni imicimbi yezemidlalo ye-premium bukhoma ngoba abathengi bavame ukufuna ukuthola indlela yokubuka le mahhala. Ngokuvela kwezindawo zokuzisakaza bukhoma njenge-YouTube Live, Twitch, njll. Abanikazi bokuqukethwe kufanele bakhathazeke ngabathengi "ukusakazwa bukhoma" kwalezi zehlakalo ezibukwa ngabantu abaningi. I-Zixi isiza amakhasimende ethu ukuletha ngokuphephile okuqukethwe kwawo okuhlosiwe ngaphandle kokuqukethwe kokuqukethwe kanye nokuvela kulezi zinkundla.
IZixi isebenzisana kakhulu nokukhathazeka kwe-piracy uma kukhulunywa ngokuhambisa imicimbi yezemidlalo kusuka kumodeli yokubuka ngakunye ye-premium. Isibonelo, i-UFC, inhlangano yezwe yokulwa nobumbano kaNdunankulu yomhlaba ehamba phambili kanye nomhlinzeki wemicimbi okhokha kakhulu emhlabeni, ihambisa isiteji se-Zixi ukuletha imicimbi ye-UFC ebukhoma. Ngalezi zikhathi ezinkulu, zesiko ezidinga ukubonwa bukhoma, ithuba lokwenza imali liphezulu. Ngokusebenzisa ipulatifomu ye-Zixi ukuthuthwa kwamavidiyo abukhoma ngezikhathi zephrofayli ephezulu, amaklayenti ethu angasebenzisa ukusatshalaliswa kwe-IP ukufinyelela ababukeli abakhulu kunabo bonke, futhi aqinisekise ngokwazi ukuthi amazinga aphezulu kakhulu okuphepha aqashwa ukuvikela ukusakazwa kwabo nemali engenayo.
Ukubhekana nobudlova, imboni kumele iqonde imithombo nezindlela zobuphangi bese izama ukuyiphazamisa. Okwamanje, ukunikela kanye nokubuyisela emuva kokuqukethwe kwevidiyo kuvikelwe yi-Zixi, ngezindlela ezichazwe ngenhla, kanye nokulethwa kokugcina kokuqukethwe kwevidiyo kubabukeli kuvikelwe Ukufinyelela Okunemibandela kanye Nokulawulwa Kwamalungelo Wedijithali, ngakho-ke usongo olukhulu lobuciko lungukuthwebula nokuqoshwa kwevidiyo okuqukethwe kuzinga ledivayisi yombukeli. Ukugenca kwamadivayisi wezibukeli nezinhlelo zokusebenza kudivayisi yombukeli kungenza ukuthi kurekhodwe futhi kusatshalaliswe futhi okuqukethwe. Isixazululo esisodwa esingahle sisongele njengale yi-watermarking; abanikazi bokuqukethwe bangangeza i-watermark engabonakali kunevidiyo bese besebenzisa uhlelo oluzenzakalelayo ukuthola ukusakazwa bukhoma kwi-inthanethi bese bakuskena kule watermark. Uma okuqukethwe kwevidiyo okungekho emthethweni sekutholakele, umnikazi wokuqukethwe angasebenza nensizakalo yokusakaza ukuvala ukusakazwa.
Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe CES2017 I-Cobalt Encoder Umnikelo Control System I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor I-MStar Ott SoftAtHome I-SoftAtHome, i-MStar, i-CES2017 I-TVU Izinethiwekhi Umlingisi wevidiyo	2019-08-06
Ngaphambilini: Amathrekhi wezobuchwepheshe: Isitoreji / i-MAM
Olandelayo: Abalingani be-MOG ne-LineUp kwa-SET EXPO 2019